Life of the Butterfly; Evolution is Not True - Myanmar-Burmese
အဓိက မေးခွန်းများ အဆက်များ ဆောင်းပါးများ စာအုပ် အမြင်များ MP3 ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ
ဖြစ်နိုင်သော အမှုကိစ္စ၊ လိပ်ပြာ၏ဘဝ သံသရာ
by Ron Lyttle http://www.creationism.org/burmese/monarch_my.htm
လိပ်ပြာတကောင်၏ ဘဝသံသယာကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ သိပ္ပံပညာရှင်များမှ ဒိုင်နားအားစ် ပလေစီပါးစ် (Danaus plexippus) ဟုခေါ်သည်။ ဤလိပ်ပြာသည် အနက်ရောင်နှင့်လိမ်မော်ရောင်တို့ ပေါင်းစပ် ထားသော အရောင်ရှိ၍ မြောက်အမေရိကတိုက်တွင် တွေ့ရသည်။ မက်စီကိုနှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားတို့ တနေ့တ ကြိမ်အပြန်အလည် ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်လေ့ရှိသည်။ (see National Geographic, vol. 150, no. 2, August 1976).
ဤလိပ်ပြာသည် မီးလ်ဝိအပင်(milkweed plant)၏အရွက်များပေါ်တွင် သေးငယ်သော ဥများချ၍ ဘဝအစပြု ရသည်။ ဥဖေါက်ရန် ၃ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိကြာတတ်သည်။ ဥဘဝမှ သေးငယ်သော အဝါရောင်၊ အဖြူရောင် နှင့် အနက်ရောင်များရှိသော ပိုးလောင်းဘဝသို့ ကူးပြောင်းလာသည်။ ဤအချိန်၌ ချေတန်ရှစ်စုံနှင့် ပါးစပ်ပေါက်ကလေးများလည်းတွေ့လာ နိုင်သည်။ ပိုးလောင်းကလေး အစာရှာဖွေစားသောက် လာနိုင်သည်။ မီးလ်ဝိအပင် (Milkweed plant) ၏အရွက်များသည် ဤပိုးလောင်းအဘိုို့ အစာဖြစ်သော်ငြားလည်း အခြား သောသတ္တဝါများအတွက်အဆိပ်အသောက်ဖြစ်နေပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် မီးလ်ဝိအပင်သည်
ပိုးလောင်းလေးအား မိမိကိုအန္တရာယ်ပေးတတ်သော သားငှက်တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့မှ သဘာဝအားဖြင့် အကာအ ကွယ် ပေးနေသည်။ ဤကဲ့သို့ လိပ်ပြာပိုးလောင်းလေးသည် မီးလ်ဝိအပင်၏ အရွက်များစားသောက်ရင်းဖြင့်တဆ တဆ ကြီးထွားလာကာ အရေခွံငါးကြိမ်တိတိလဲရသည့်အထိဖြစ်လာသည်။
ထို့နောက် လိပ်ပြာပိုးလောင်းကလေးသည် အရွက်များစားသောက်ခြင်းများ ရပ်သန့်၍ ပိုးအိမ်ကလေးတခု (chrysalis) တည်ဆောက်ကာ နောက်တကြိမ် အရေခွံလဲခါ ဘဝနောက်တဆင့်တို့ ကူးပြောင်းလာပြန် သည်။ ပိုး ကောင် အနေအထားများပြောက်ကွယ် သွားသည်။ ဤအဆင့်၌ ခြေထောက်များ၊ မျက်လုံးများ နှင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ အင်္ဂါရပ်များ မတွေ့ရ တော့ပေ။ ဤအဆင့်ကို ပူပါး (pupa) ဟုခေါ်သည်။ ဤဘဝတွင် တောက်ပသော အစိမ်းရောင် နှင့် ရွှေဝါရောင်အကွက်များဖြင့်တွေ့ မြင်ရသည်။ အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန် အမြင်၌ အသေကောင်ကဲ့သို့ ထင်နေရသော် လည်း နှလုံးသားများလုပ်နေသည်။ အတွင်း၌ များစွာသော ပြောင်းလဲမှုများ အပြင်းအထန်ဖြစ်ဖွါး နေသည်။
ဤကဲ့သို့ ဆိပ်ငြိမ်စွာ နှစ်ပတ်ခန့်ကြာရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပိုးအိမ်ကလေးပွင့်ထွက်၍ အ ရွယ်ရောက်သော လိပ်ပြာတကောင် ဖြစ်လာသည်။ လိပ်ပြာ၌ ခြေတန်ခြောက်စုံပါရှိ၍ နာခေါင်းထိပ်၌ ရှည်လျားသောပြွန်တန်တခုပါရှိ သည်။ ဤပြွန်တန်ကလေးကိုအသုံးချကာ ပန်းဝတ်ရည်များအား စုပ်ယူသောက်သုံးလေ့ရှိသည်။ တောင်ပံများယပ် ခတ်ကာ လေထဲတို့ စတင်ပျံသန်း သွားလာနေသည်။ ယခုအချိန်မှစ၍ ပန်းလိပ်ပြာလေး ပန်းဝတ်ရည်များစုပ်ယူဘို့ ရာ ပန်ဥယျာဉ်များတို့၌ တွေ့မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ဖြင့် လိပ်ပြာလေးသည် အဖော်စပ်ကာ ဘဝသံသရာ အသစ်တဖန်စတင် လေ့ရှိသည်။
ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း အယူအဆကိုလက်ခံပါလျှင် ဤလိပ်ပြာ၏ အဆင့်ဆင့်ဘဝပြောင်းလဲလာရပုံအားရှင်းပြပေး ပါ။ လိပ်ပြာတကောင်ဖြစ်လာဘို့ရာ ညာဏ်စွမ်းရည်တခုတခု၏ ပန့်ပိုးမူမပါဘဲ မိမိအလိုအလျောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသ လား? ။ သဘာဝအားဖြင့် မတော်တဆ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား?။ လိပ်ပြာလောင်း၏ အဆင့်လေးခုထဲမှတခုခု မပါဘဲ လိပ်ပြာတကောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါအုံးမလား?။ ဥအဆင့်မှပိုးလောက်လန်းအဆင့်၊ ပိုးလောက်လန်းအဆင့်မှ ပိုးတုံးလုံး အဆင့်၊ ပိုးတုံးလုံးအဆင့်မှ အရွယ်ရောက်လိပ်ပြာတကောင်အဆင့် စသောအဆင့်များ သည်တစုံတဦး၏ စီမံမှုမပါ ဘဲဖြစ်လာနိုင်ပါသလား?
လိပ်ပြာတကောင်ဖြစ်လာဘို့ရာ ဤအဆင့်များ အားလုံးလိုအပ်သည်။ အဆင့်တခုတခု ချန်ထားခဲ့၍မရပါ။ အဆင့်များထဲမှ တခုခုချို့ယွန်းမိခဲ့ပါလျှင် လုံးဝလိပ်ပြာဖြစ်လာနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ အချိန်လည်းတိတိကျကျ ရှိဘို့ လိုအပ်သည်။ အချိန်နောက်ကျ၍ မရပါ။ နောက်ကျနေခဲ့မိပါလျှင် အစီအစဉ်အားလုံး ပျက်စီးသွားပေမည်။
သင်သည် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဝါဒီ(Evolutionist) တဦးဖြစ်နေခဲ့ပါလျှင် ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိပ္ပံနည်းကျသော ရှင်းလင်းချက်များ ပေးနိုင်ပါသည်။ မျိုးရိုးဗီဇဗေဒ ပညာရှင်များလက်ခံနိုင်သော ရှင်းလင်းချက် များဖြစ်ပါစေ။ သဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်လာသည်၊အလိုအလျောက်ဖြစ်၍လာရသည်စသောရှင်းလင်းမှုမျိုး မဖြစ်သင့်ပေ။
" ဖြစ်နိုင်သော အမှုကိစ္စ၊ လိပ်ပြာ၏ဘဝ သံသရာ"